Ejidere onye njem nlegharị anya America na Ukraine maka iyi uwe elu Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Ukraine » Ejidere onye njem nlegharị anya America na Ukraine maka iyi uwe elu Russia
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Na vidiyo nke ihe merenụ Ukraine, nke ebipụtara na ntanetị, onye a na-enyo enyo, yi uwe elu nke edere okwu "Russia" na ọkọlọtọ mba ahụ, nwere ike ịnụ na-eji ihe ọchị eme ndị uwe ojii ka ha 'na-akwa ákwá' 'ma na-akpasu ndị uwe ojii na-ekwusi ike. na “ị bụ onye Nazi,” yana “gịnị ka ị ga -eme - jide m?”
Onye ọbịa US ejidere na Odessa maka omume adịghị mma.
Onye America na -agọnarị ihe ọjọọ ọ bụla mgbe ejidere ya na Ukraine.
Ndị njem nlegharị anya US na -akpaghasị iwu ọha, na -akpalite esemokwu na Odessa nke Ukraine.
Ndị uwe ojii n'obodo Odessa nke dị na ndịda Ukraine jidere otu nwoke, onye a na -eche na ọ bụ onye njem nlegharị anya nke America maka ebubo na ọ kpatara ọgba aghara n'oge a na -eme ememme ncheta ụbọchị nnwere onwe Ukraine na USSR.
Odessa Isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii mpaghara kwenyere na ejidere nwa amaala mba ọzọ dị afọ 26 maka "ịkpaghasị iwu ọha."
Nkwupụta nke ngalaba ndị uwe ojii mpaghara wepụtara na -agụ, "n'oge ịtọpụ ọkọlọtọ Ukraine na steepụ Potemkin, nwoke ahụ kpara àgwà enweghị isi ma kpalite esemokwu ya na ndị na -eme mmemme ahụ."
"N'adịghị anabata arịrịọ ndị ọrụ mmanye iwu ka ha kwụsị ọrụ iwu na -akwadoghị, nwoke ahụ nwara ịgbapụ ozugbo a kpọgara ya n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii," ka ọ gara n'ihu.
Na vidiyo nke ngwa ahụ Ukraine Ihe merenụ, bipụtara na ntanetị, onye a na-enyo enyo, yi uwe elu nke edere okwu ahụ bụ "Russia" na ọkọlọtọ mba ahụ, nwere ike ịnụ ji njakịrị na-akwa ndị uwe ojii ọchị ka ha "na-akwa ákwá," na-akpasu ndị uwe ojii na-ekwusi ike na "ị bụ Nazi, "na" gịnị ka ị ga - eme - jide m? " Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii ekwupụtabeghị nkọwa ọ bụla, ọ dị ka ọ na -ekwu okwu n'asụsụ ndị America na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara ekwuola na ọ bụ nwa amaala US.
Na vidiyo ọzọ si ebe ahụ, ọ jiri anyaike gọnarị mmejọ ọ bụla, na -ekwusi ike na ọ “ka na -agagharị ma ndị uwe ojii jidere ya. Nke a ọ bụ nnwere onwe na Ukraine? ”
Dị ka ụfọdụ akụkọ si kwuo, a mụrụ nwoke ahụ na Russia na 1994 wee kwaga US mgbe ezinụlọ ya kwagara ebe ahụ.
Nwoke ahụ, onye a na -akpọghị aha ya, na -ajụ ajụjụ ugbu a, a ga -ebokwa ya ebubo na ọ na -eme mkpọtụ na kpachaara anya nupụ isi n'iwu iwu ma ọ bụ arịrịọ onye uwe ojii.